ယောက်ျားလေး လိင်အင်္ဂါ အတိုအရှည်အား လက်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင် - CeleLove
ယောက်ျားလေး လိင်အင်္ဂါ အတိုအရှည်အား လက်ကိုကြည့်၍ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်တဲ …. ။ ယောက်ျား- အင်္ဂါ အတိုင်းအတာကို လက်ဝါးက ပြနေသည်။ ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ ဖတ်ပီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပေါ့နော် …. ။ ယောက်ျားတွေရဲ့လက်မှာ လက်ညှိုးဟာ လက်သူကြွယ်ထက် တိုနေရင် သူ့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါက ရှည်တဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်တယ် လို့ တောင်ကိုရီးယား သုတေသီတွေက Asian Journal of Andrology မှာ ရေးလိုက်ပါတယ် …. ။
Incheon မှာ ရှိတဲ့ Gachon University Gil Hospital ဆေးရုံ၊ ဆီးလမ်း အထူးကုဌာနက Tae Beom Kim ကနေ ယောက်ျား ၁၄၄ ယောက်ကို မေ့ဆေးပေးပြီး လိင်အင်္ဂါ အရှည်ကို တိုင်းတာကြည့်ပြီးမှ စမ်းသပ်ပြီး ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။ စမ်းသပ်ခံသူတွေရဲ့ ညာဘက်လက် ကိုသာ သုံးပါတယ်။ အရင်က စမ်းသပ်မှုတွေအရ ညာလက်ဟာ Testosterone ခေါ်တဲ့ ကျား-ဟော်မုန်းကို တုံ့ပြန်တာမှာ ပိုသိသာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ digit ratio လက်ချောင်း-အချိုး နည်းသူတွေဟာ လိင်အင်္ဂါ ပိုရှည်ပါသတဲ့နော် ….. ။
ယောကျြားလေး လိငျအင်ျဂါ အတိုအရှညျအား လကျကိုကွညျ့၍ မှနျးဆနိုငျ
ယောကျြားလေး လိငျအင်ျဂါ အတိုအရှညျအား လကျကိုကွညျ့၍ မှနျးဆနိုငျပါတယျတဲ …. ။ ယောကျြား- အင်ျဂါ အတိုငျးအတာကို လကျဝါးက ပွနသေညျ။ ဗဟုသုတပေါ့ဗြာ ဖတျပီး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ကွပေါ့နျော …. ။ ယောကျြားတှရေဲ့လကျမှာ လကျညှိုးဟာ လကျသူကွှယျထကျ တိုနရေငျ သူ့ရဲ့ လိငျအင်ျဂါက ရှညျတဲ့ အမြိုးအစား ဖွဈတယျ လို့ တောငျကိုရီးယား သုတသေီတှကေ Asian Journal of Andrology မှာ ရေးလိုကျပါတယျ …. ။
Incheon မှာ ရှိတဲ့ Gachon University Gil Hospital ဆေးရုံ၊ ဆီးလမျး အထူးကုဌာနက Tae Beom Kim ကနေ ယောကျြား ၁၄၄ ယောကျကို မဆေ့ေးပေးပွီး လိငျအင်ျဂါ အရှညျကို တိုငျးတာကွညျ့ပွီးမှ စမျးသပျပွီး ပွောတာ ဖွဈပါတယျ …. ။ စမျးသပျခံသူတှရေဲ့ ညာဘကျလကျ ကိုသာ သုံးပါတယျ။ အရငျက စမျးသပျမှုတှအေရ ညာလကျဟာ Testosterone ချေါတဲ့ ကြား-ဟျောမုနျးကို တုံ့ပွနျတာမှာ ပိုသိသာလို့ ဖွဈပါတယျ။ digit ratio လကျခြောငျး-အခြိုး နညျးသူတှဟော လိငျအင်ျဂါ ပိုရှညျပါသတဲ့နျော ….. ။